बजार(Market) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ३९.९२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले उत्पादन बिक्रीबाट ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको छ। गत वर्ष कम्पनीले उत्पादन बिक्रीबाट ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीको अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी...
काठमाण्डौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको गत आर्थिक वर्षको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज चैत १४ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले भोलि चैत १५ गतेदेखि चैत ३० गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ।यसको मतलब आज चैत १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। कम्पनीले आफ्नो ५५ औँ वार्षिक साधारणसभा यही चैत ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल १०.५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १० प्रतिशत बोनस...
काठमाण्डौ । हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १२.७० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अवधिमा कम्पनीले उत्पादन बिक्रीबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा उत्पादन बिक्रीबाट ९६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। चुक्तापुँजी ८६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको रिजर्भको आकार ५६.२७...
काठमाण्डौ । चाडपर्वका बेला नेपालीको भान्सा महँगिएको छ। भर्खरै दसैँ सकिएको र तिहार नजिकिँदै गर्दा नेपालीको भान्सा महँगिएको हो। एकातिहार चाडपर्वको खर्च र अर्कोतिर भान्सामा आवश्यक विभिन्न वस्तुको मूल्य महँगिदा जनता मारमा परेका छन्। पछिल्लो १ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालीको भान्सामा अत्याधिक प्रयोग हुने सुकेको प्याजको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज कात्तिक ४ गते सुकेको प्याज (भारतीय) को प्रतिकेजी औसत ७३.५ रुपैयाँ रहेको छ। जब कि गत असोज ५ गते प्रतिकेजी औसत मूल्य ४७ रुपैयाँमात्रै थियो। यो हिसाबले...
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेडले आफ्नो छैटौँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत असोज २२ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो कात्तिक १६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको होटेल सोल्टीमा बिहान १० बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको २९ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) अनुमोदन गर्नेछ। कम्पनीले चुक्तापुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको २९ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश (करसहित) प्रस्ताव गरेको छ। वार्षिक साधारणसभा र लाभांश...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपालमा जलविद्युत आयोजनालाई ‘सेतो सुन’ पनि भनेर चिनिन्छ। जलविद्युत आयोजनाहरुले सञ्चालनमा आएको १५ वर्षसम्म सरकारलाई तिर्ने करमा सहुलियत पाउने हुँदा पनि लगानीकर्ता जलविद्युतमा आकर्षित हुन्छन्। त्यसका अलवा जलविद्युत कम्पनीहरुको प्रतिफल पहिले नै निश्चित तथा नियमित हुने हुँदा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा यो क्षेत्र परेको हुन सक्छ। अप्पर तामाकोशी देशका जलविद्युत आयोजनामध्ये एकमात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। आज हामीले अप्पर तामाकोशीलाई प्राविधिक तथा आधारभूत पक्षबाट केलाउने प्रयत्न गरेका छौँ। आधारभूत पक्ष यो...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । साल २०७८ लाई फर्केर हेर्दा नेपालको सेयर बजार इतिहासमै अविष्मरणीय रह्यो। सेयर बजारको २८ वर्षे इतिहासमा यही वर्ष भदौ २ गते नेप्सेले हालसम्मकै उच्च ३१९८ विन्दु चुमेको थियो। सूचकमात्रै नभएर यो वर्ष एकैदिन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएर भोलुम र कारोबारको हिसाबले पनि बजार सम्झनायोग्य रह्यो। प्राविधिक रुपमा २०७८ को सेयर बजारलाई नियाल्दा सुरुआती ४ महिना बजार अधिक बुलिस बनेको देखिन्छ। २०७८ वैशाख १ गते नेप्से परिसूचक २७१८ को विन्दुमा बन्द भएको थियो। अघिल्लो वर्ष २०७७ मा नै बुलिस अवस्थामा रहेको नेप्से २०७८ को...
-अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयरबजारमा दसैं अगाडि हराएको रौनक यो साताको २ वटा सुरुवाती कारोबार दिनमा पनि आउन सकेको छैन । बिगत दश कारोबारलाई हेर्दा सेयर कारोबार रकम र भोल्युम दुवैमा गिरावट भएको देखिन्छ । बिगतका १० वटा कारोबार ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको देखिन्छ । यसले लगानीकर्ता 'पर्ख र हेर'को अबस्थामा भएको बुझिन्छ । आइतबारको कारोबारको तुलनामा सोमबार कारोबार बढे पनि नेप्से इन्डेक्स घटेको छ । क्याण्डल स्टिकको आधारमा आज कालो लामो मारुबुजु बनेकोले बजारमा थप अझै केही दिन बिक्री चाप पर्नसक्ने देखिन्छ । गत साता लामो दसैं बिदा परेकोले र कारोबार नभएकोले...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आधारभूत विश्लेषणजतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ प्राविधिक पक्ष। आधारभूत पक्षले कम्पनी छनोटलाई जनाउँछ भने प्राविधिक पक्षले छानिएको कम्पनीलाई कुन समयमा कारोबार गर्ने भन्ने अवगत गर्छ। मान्छेका सीमित साधन र असीमित आवश्कता हुन्छन्। त्यही सीमित साधनलाई उच्चतम प्रतिफलका लागि लगाउनु नै व्यापार हो। सेयर बजारमा ‘समय नै पैसा’ हो। किनकि यहाँ पनि ‘अपरच्युनिटी कस्ट’ हुन्छ। अथवा आफूसँग भएको पैसा कुन स्क्रिप्टमा लगाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। आज हामीले विभिन्न सेक्टरलाई बोलिंगर ब्यान्डमा राखेर...
-धनकुमार राई गत ३ सातादेखि नै प्राविधिक गणितले प्राप्त बुलिस गार्टलेको अभ्यासअनुसार दोश्रो लक्ष्य उन्मुख कारोबार यो साता पनि निरन्तर रहने देखिन्छ । Bullish Gartley (Butterfly Pattern) बिस्तारमा : 1.AB (1288 देखि 1212) ले XA (1162 देखि 1288) को ७८.६ प्रतिशत सम्म फर्किन सक्ने अभ्यासअनुसार नेप्से सुचकांक पनि ६१.८ प्रतिशत १२१२ सम्म फर्किएको । 2.BC (1212 देखि 1250) ले AB (1288 देखि 1212) को 38.2% देखि 88.6% प्रतिशत सम्म फर्कन सक्ने अभ्यास अनुसार नेप्से ६१.८ प्रतिशत १२५० सम्म फर्किएको देखिन्छ । 3.CD (1250 देखि 1109), AB(1288 देखि 1212) को 161.8% देखि 261.8% एक्सटेन्ड हुने अभ्यासअनुसार नेप्सेमा 161.8% एक्सटेन्ड भइसकेपछि बिन्दु D(1109) बिन्दु ...
काठमाण्डौ । लगातार २ दिन स्थिर रहेको सुन–चाँदीको भाउ आज बुधबार सामान्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार सुनको भाउ स्थिर रहेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर १ हजार २७५ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो भाउ स्थिर रहँदै चाँदी १ हजार २७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। ...
आज पनि सुन–चाँदीको भाउ स्थिर
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा लगातार दोस्रो दिन पनि सुन–चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार पनि सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँमै कारोबार भएको छ। आज चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहँदै तोलाको १ हजार २७० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि भाउ स्थिर रहँदै चाँदी १ हजार २७० रुपैयाँमै कारोबार भएको थियो। ...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सोमबार सुन–चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन–चाँदी दुवैको भाउ स्थिर रहेको हो। आज भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ नै कायम भएको छ। हिजो तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। चाँदीको भाउ पनि आज स्थिर रहँदै तोलाको १ हजार २७० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि भाउ स्थिर रहँदै चाँदी १ हजार २७० रुपैयाँमै कारोबार भएको थियो। ...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ७०० रुपैयाँले हो। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ८०० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आज चाँदीको भाउ स्थिर रहँदै तोलाको १ हजार २७० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर चाँदी १ हजार २७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। ...
रु. १ हजारले महँगियो सुन, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार पनि सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर १ हजार २७० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर चाँदी १ हजार २५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको �...
-अनन्त्य सुन्दर नेपालमा अहिले ५० वटा ब्रोकरहरू सञ्चालनमा छन्। दैनिक रूपमा बजारमा कारोबार बढ्दै गएको छ। ब्रोकरले फोन नउठाउने, समयमा सेयर र पैसा नहाल्दिने जस्ता व्यवहारले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन्। साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई ब्रोकरहरूले गर्ने व्यवहारले, ‘के ब्रोकर ठूला लगानीकर्ताका लागि मात्र हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो नेपाली सेयर बजारको सामयिक र यक्ष प्रश्न हो। केही महिना अगाडि म अनामनगरस्थित ब्रोकर नम्बर ४५ अर्थात् इम्पेरीयल सेक्युरिटिजमा गएँ। म ब्रोकरमा कारोबार खाता बन्द गर्न गएको थिएँ। खाता बन्द गर्न इमेल लेख्न भनियो। खाता बन्द गर्ने...
काठमाण्डौ । कुल बजार पूँजीकरणले आज सर्वाधिक रेकर्ड कायम गरेको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेप्से परिसूचकले आज सर्वाधिक उचाई कायम गरेको दिन बजार पूँजीकरणसमेत २८ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बढी भएको छ । सेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बिहीबार बजार पूँजीकरण हिजोको तुलनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आजै नेप्से सूचक र बजार पूँजीकरणले समेत ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको हो । यसअघिको नेप्से अलटाइम हाई गत डिसेम्बर २ तारिखमा कुल बजार पूँजीकरण २७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बढी थियो भने हिजो बुधबार पनि बजार पूँजीकरण २७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बढी...
काठमाण्डौ । हिमालय डिस्टीलरी लिमिटेड र मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका आज आइतबार रोक्का भएको सेयर कारोबार पुनः फुकुवा भएकाले भोलिदेखिबाट भने कारोबारमा आउने भएको छ । नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक नवीकराण शुल्क आज बुझाइसकेपछि हिमालय डिस्टीलरी लिमिटेड र मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका सेयर भोलि सोमबारबाट धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्र्न सकिने भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये आज ५ वटा कम्पनीहरुले सूचीकरण विनयमावली बमोजिम वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ५ वटा कम्पनीहरुले सूचीकरण विनयमावली बमोजिम वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का भएको छ । नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदका अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ५ वटा कम्पनीहरुले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन ढिला गरेका कारण कारोबार रोक्का गरेको जानकारी दिएका छन् । मल्टीपर्पोज फाइनान्स, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर,जोशी हाइड्रोपावर,नेपाल हाइड्रो डेभलपर,हिमालय डिष्टीलरी गरी ५ कम्पनीको आज सेयर कारोबार रोक्का भएको हो । नेप्सेका अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरु...
काठमाण्डौ । बुधबार सेयर कारोबारमा नयाँ इतिहास बनेको छ । यो दिन नेप्सेमा हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबारको रेकर्ड बनेको हो । यो दिन ४५ हजार २७२ पटक सेयर कारोबार भई गत सोमबार कायम रेकर्ड ४० हजार २०६ पटक सेयरलाई तोडिएको नेप्सेले जनाएको छ । पछिल्ला समयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत् सेयर कारोबार गरिरहेकाले यो रेकर्ड कायम भएको बताइन्छ । हिजोका दिनमा ब्रोकरलाई फोन वा म्यासेजका आधारमा अर्डर इन्ट्री गर्न कठिनाई भइरहेकोमा आजका दिनमा लगानीकर्ता स्वयंले घरबाटै सहज रुपमा सेयर कारोबार गर्न सकेकाले समेत कारोबार संख्याले रेकर्ड कायम गरेको जानकार...